June 2020 - Lucky9
June 30, 2020 Thi Ha 0
ကရင်ပြည်နယ် ထုံးအိုင်မြို့နေ လူငယ် မိန်းခလေး သုံးယောက်သည် 28. 6. 2020 မနက် 6:00 နာရီတွင် ပျောက်ဆုံးနေပါသည် ထိုခလေး များ၏ မိဘများ အလွန်ပူပင်သောက ရောက်နေပါသည် တွေ့ရှိသော မိဘပြည်သူများ အနေဖြင့် ကျွန်ုပ်၏ ဖုန်းသို့ ဆက်သွယ်အကြောင်းကြားနိုင်ပါသည် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်မှာ […]
သရုပ်ဆောင် ဇေရဲထက်ကတော့ ဗီဒီယိုဇာတ်ကားတွေ ခေတ်ကောင်းစဉ်အခါက ပြိုင်ဘက်ကင်း ကျော်ကြားသူတစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဗီဒီယိုဈေးကွက်ပျက်သွားချိန်မှာတော့ ဇေရဲထက်က အရင်ကလောက် အနုပညာအလုပ်တွေ မလုပ်ကိုင်ဖြစ်တော့ပဲ ကုသိုလ်ရေးကိုသာ ပိုမိုလုပ်ကိုင်ပြီး သူ့ရဲ့ဘဝကို အေးချမ်းစွာ ဖြတ်သန်းနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အရင်ကလောက် ဇာတ်ကားတွေမရိုက်ကူးဖြစ်တော့ပေမယ့် ဇေရဲထက်ကို အားပေးချစ်ခင်တဲ့ ပရိသတ်တွေက တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ အများအပြားရှိနေဆဲ […]
” ပါမောက်ခခြုပျ ဆရာတျော ”” အရှငျနန်ဒမာလာဘိဝံသ ”၏” ငယျဘဝ ပုံရိပျလှာ ”နှငျ့” ရှိတျောမူခဲ့သော ဘှဲ့ လကျမှတျမြား ” * ဆရာတျောသညျ၁၃၁၄ ခုနှဈ သကျတျော( ၁၃ ) နှဈအရှယျတှငျအဘိဓမ်မာစာမေးပှဲ သုံးဆငျ့ စတငျအောငျမွငျခဲ့လသေညျ ။ * ၁၃၁၅ […]
မငျးသားခြောလေး အလငျးရောငျကတော့ နှုတျခမျးနီမလေးတှရေဲ့အသညျးကြျောတဈဦးလို့ ဆိုရလောကျအောငျ မိနျးကလေးပရိသတျတှရေဲ့အားပေးဝနျးရံခွငျးခံထားရတာ ဖွဈပါတယျ။ အလငျးရောငျက ခြောမောခနျ့ညားတဲ့ ရုပျရညျနဲ့ ယောကျြားပီသသလို Body အခြိုးအစားကလညျး ကဈြလဈတောငျ့တငျးနတော ဖွဈပါတယျ။ အလငျးရောငျက သရုပျဆောငျအလုပျအပွငျ တေးသီခငျြးတှပေါဖနျတီးနတေဲ့ အဆိုတျောတဈဦးလညျး ဖွဈပါတယျ။ မနကေ့တော့ အလငျးရောငျက မငျးသမီးခြောလေး နခွေညျဦးနဲ့အတူ တှဆေုံ့ခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။ […]
ပရိသတ်တွေရဲ့အချစ်တော် အဆိုတော် ဖြိုးပြည့်စုံကတော့ ဒီနေ့မှာ အလှူလေးတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ အကြောင်းကို သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေ ပရိတ်တွေသာဓုခေါ်ဆိုလို့ရအောင် မျှဝေဖော်ပြလာခဲ့ပါတယ်။ အလှူလေးကတော့ ချင်းပြည်နယ် ကန်ပက်လက်မြို့ ရင်သွေးငယ်များခိုလှုံရာ လူငယ်ဖွံဖြိုကရေး ပရဟိတဂေဟာမှာ ရေစုကန်ဆောက်လုပ်ဖို့ကိုလှူဒါန်းပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဖြိုးပြည့်စုံကတော့ ဒီအလှူလေးကို ပြီးခဲ့တဲ့ မွေးနေ့အတွက်ရယ်. အမေဖြစ်သူအတွက်ရယ် ဆရာဖြစ်သူ KAT အတွက်အလှူလေးပြုလုပ်ချင်တာကြောင့် စုထားတဲ့ […]
နိုင်ငံရေးနှင့် ပတ်သက်သော မိတ်ဆွေရင်း တစ်ဦး၏ အိမ်တွင် အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ဦးကြည်မောင်နှင့် စတင်တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ထို့နောက်တွင် ဦးထွေးမြင့်မှတစ်ဆင့် ဦးကြည်မောင်ကို ကမ်းလှမ်းဖိတ်ခေါ်ခဲ့သည်။ (၂) ကြိမ်အထိ ဦးကြည်မောင်က ငြင်းဆိုခဲ့သည်။ နိုင်ငံရေးမလုပ်လိုတော့သောကြောင့် ဖြစ်သည်။ တတိယအကြိမ် ကမ်းလှမ်းမှုတွင် ဦးကြည်မောင်က လက်ခံ ခဲ့ပါသည်။ဦးကြည်မောင်က အောင်ဆန်းစုကြည်ကို သွားရောက် တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ […]
June 29, 2020 Thi Ha 0
ကြယ်စင်ကြွေတဲ့နေ့ ဆေးခတ် မုဒိမ်းကျင့်ခံရပြီး ဆေးဆိပ်တက် သေဆုံးခဲ့ရတဲ့ အထက်တန်း ကျောင်းသူလေးပါ သူမဟာ အထက်ကျောင်းမှာအလှဆုံးမိန်းကလေးလို့သတ်မှတ်ခံထားရသူပါ။ ထိုင်းနိုင်ငံ ကန်ချနဘူရီခရိုင် အတွင်းက အထက်တန်း ကျောင်းသူ အသက် ၁၈ နှစ်အရွယ်နောင်းဒေါင် (ကြယ်စင်) ဇွန်လ ၁၆ရက်နေ့က သူငယ်ချင်းက ကားနဲ့ လာခေါ်သွားခဲ့ကြတာပါ၊ နောက်တနေ့ ဇွန်လ၁၇ […]
စိုးပြည့်ကိုချစ်ခင်တဲ့သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေများ…fansများ..followerများအားလုံးကိုအသိပေးချင်တာလေးရှိပါတယ်ရှင့်….စိုးပြည့်ရဲ့အကောင့်ကိုcomment ပိတ်ရပါတော့မယ်ရှင့်… ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လွန်ခဲ့တဲ့..6လ၇လလောက်ကစပြီး…စိုးပြည့်ရဲ့ယခုaccမှာရော…pageမှာပါ…အကောင့်မျိုးစုံဖွင့်ပြီး..အမေ..ညီမ..မိန်းကလေးများမကြားအပ်တဲ့..မမြင်အပ်တဲ့စကားလုံးများနဲ့..commentရေးပြီး…နှောက်ယှက်ခဲ့ပါတယ်ရှင့်… အဲ့ဒီထဲကမှအင်မတန်အယဉ်ကျေးဆုံးcommentများသာပြထားပါတယ်…ဒီထက်ဆိုးလွန်းတာတွေကြီးပါဘဲ….ဘယ်ကစတာလဲဆိုရင်တော့…စိုးပြည့်နမည်နဲ့ဘေလ်လိမ်ရာကနေ…fansတွေကစိုးပြည့်မဟုတ်မှန်းသိသွားပြီး….fansများနဲ့ကတောက်ကဆဖြစ်ကြတယ်… အဲ့ချိန်ကစလို့….accမှာရော..pageမှာပါနှောက်ယှက်ခဲ့ပါတယ်…ဘဝမှာတခါမှတော့မကြုံခဲ့ဖူးပါဘူး…ဝေဖန်တယ်ဆိုတာအနုပညာရှင်တိုင်းကြုံတွေ့ရသလိုလက်ခံရပါတယ်…ဒါပေမဲ့လည်းဒီလိုတော့မကြုံဖူးဘူးပေါ့နော်…ဒီပိုစ့်ကိုလည်းစိုးပြည့်မတင်ချင်ပါ…. ဒါပေမဲ့သူအကောင့်အသစ်တွေဖွင့်ပြီးရိုင်းပျစွာmentတိုင်းစိုးပြည့်အကောင့်ထဲကမိတ်ဆွေများကိုအင်မတန်အားနာမိပါတယ်…မဖတ်ဝံ့တဲ့စကားလုံးတွေကြောင့်မိန်းကလေးတစ်ဦးအနေနဲ့ရှက်ရွံ့ပါတယ်… စိတ်မကောင်းလည်းဖြစ်မိပါတယ်…ဒါပေမဲ့စိုးပြည့်မတုန့်ပြန်ခဲ့ဘဲအေးဆေးစွာနေခဲ့ပါတယ်….အမြင်မတော်တဲ့commentတွေကိုဘဲဖျက်ခဲ့လိုက်ပါတယ်….ကိုယ့်ကိုချစ်ခင်လို့commentပေးသူများအတွက်comment boxကိုလည်းမပိတ်ခဲ့ပါဘူး….. ရိုင်းပျတာတွေဝင်ရေးမှာစိုးလို့blockလည်းနောက်တစ်ကောင့်နဲ့ထပ်ပြီးနှောက်ယှက်ပါတယ်…ခုပိုဆိုးတာကစိုးပြည့်ပရိုဖိုင်ပုံ..စိုးပြည့်နမည်တစ်ပုံစံထဲပြုလုပ်ပြီး…ပရိသတ်တွေရဲ့ကွန်မန့်အောက်မှာရိုင်းပျတာတွေ…ရေးသားတဲ့အတွက်….တချို့မသိသောပရိ သတ်များကစိုးပြည့်ကrpကိုရိုင်းစိုင်းစွာပြန်တယ်လို့စိတ်မကောင်းဖြစ်ကြမှာစိုးလို့…စိုးပြည့်comment ပိတ်လိုက်ပါပြီရှင်…. ချစ်တဲ့သူများ..follwersများကိုအလေးထားချစ်ခင်လို့ဒီစာကိုရေးသားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်….အားလုံးကိုတောင်းပန်ပါတယ်ရှင်….ကျေးဇူးလည်းအများကြီးတင်ပါတယ်…စိုးပြည့်ကိုနားလည်ပေးကြပါနော်❤️ကံ..ကံ၏အကျိုးကိုစိုးပြည့်အင်မတန်ယုံကြည်သက်ဝင်ပါတယ်🙏🙏🙏 လို့ ရေးသားခဲ့ပါတယ်။ လူတွေလည်း ခက်တယ်ဗျာ နေရင်းထိုင်ရင်း အရည်မရအဖတ်မရ သူတစ်ပါးပျက်စီးအောင် ထိခိုက်နစ်နာအောင် တမင်တကာ တိုက်ခိုက်နေကြတာဗျာ။ ဘယ်လိုစိတ်ဓာတ်တွေလည်း။ ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ ပရိတ်သတ်ကြီးလည်း […]
မြန်မာနိုင်ငံမှာ နေသရွေ့တော့ အပြာကား ရိုက်ဖို့ အစီအစဉ်မရှိဘူးဆိုတဲ့ ဒေါက်တာနန်းမွေစံ(ရုပ်/သံ) မော်ဒယ်နန်းမွေစံကတော့ ပရိသတ်တွေရဲ့ ချစ်ခင်အားပေးမှုကိုအခိုင်အမာရယူထားနိုင်တဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ယခုမှာ အနုပညာအလုပ်တွေအနေနဲ့ ကြော်ငြာတွေကို ရိုက်ကူးလျက်ရှိနေပါတယ်။ မိန်းကလေးတိုင်းအားကျရပြီး တောင့်တင်းတဲ့ အမိုက်စားကောက်ကြောင်းအလှကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ သူမကတော့ ပရိသတ်တွေကြားနာမည်ကျော်ရေပန်းစားလျက်ရှိနေတဲ့ မော်ဒယ်တွေထဲမှာလည်းတစ်ယောက်အပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ အမိုက်စားကောက်ကြောင်းအလှတွေ ပေါ်လွင်နေတဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေကို ပရိသတ်တွေအတွက် […]
ယဉ်မျိုးသွယ် မန္တလေးမြို့တွင် ဆိုင်ကယ်စီးလာသူ စုံတွဲအား ရည်းစားဟောင်းမှ သေနတ်ဖြင့်ပစ်ခတ်မှုတွင် အသုံးပြုခဲ့သည့်သေနတ်မှာ ကျောင်းဆရာမ အငြိမ်းစားတစ်ဦးထံမှ ရရှိသဖြင့် ၎င်းကိုပါ အရေးယူစစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်နေကြောင်း တိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့မှ သတင်းရရှိသည်။ ထို့ပြင် အဆိုပါအမှုတွင် ကျူးလွန်သူများအနက် အသက်မပြည့်သေးသူများပါဝင်ကြောင်း သိရသည်။ Unicode ယဉျမြိုးသှယျ မန်တလေးမွို့တှငျ ဆိုငျကယျစီးလာသူ စုံတှဲအား […]